ASUR na-ekwupụta ọnụ ọgụgụ ndị njem njem maka Disemba 2017
Home » Akụkọ ụgbọ elu » ASUR na-ekwupụta ọnụ ọgụgụ ndị njem njem maka Disemba 2017
Trafficgbọ njem ndị njem rịrị elu na 6.1% na Mexico, wee jụ 23.9% na San Juan na 12.3% na Colombia.
Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV, otu ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na arụmọrụ na Mexico, US na Colombia, taa kwupụtara na ngụkọta ndị njem njem maka Disemba 2017 jụrụ 3.5% ma e jiri ya tụnyere Disemba 2016. Ndị njem njem rịrị elu 6.1% na Mexico, na jụrụ 23.9% na San Juan na 12.3% na Colombia.
Nkwupụta a na-egosipụta ntụnyere dị n'etiti Disemba 1 ruo Disemba 31, 2017 na 2016. Ọnụ ọgụgụ a kpokọtara na-egosipụta ntụnyere dị n'etiti Jenụwarị 1 na Disemba 31, 2017 na 2016. Ndị njem njem na ndị njem ụgbọ elu izugbe na-ewepu maka Mexico na Colombia.
Rịba ama na mbelata nke ndị njem na San Juan Airport na-egosipụta mmetụta nke Ajọ Ifufe Maria, nke dakwasịrị agwaetiti ahụ na Septemba 21, 2017. Na Colombia, ndị ọrụ ụgbọelu na-eme njem metụtara ndị njem ụgbọ njem na nnukwu ụgbọelu mba ụwa.
WTTC na-agba mbọ ijikọ ụwa ụfọdụ maka mgbake njem
Ndị ọrụ njegharị nke India guzobere ndị ọrụ iji merie COVID-19